Boqoradda 'AMAZED' Meghan Markle oo u diri doona mahad gaar ah ka dib safarkiisa Morocco - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Queen 'AMAZED' Meghan Markle oo u diri doonta si gaar ah mahadsanid ka dib safarkeeda Morocco
Boqoradda 'AMAZED' Meghan Markle ayaa u diri doona mahad gaar ah kadib safarkiisa Morocco
Duchess of Sussex ayaa ku farxay Boqortooyada iyada oo la socota anshaxeeda shaqada markii ay ku dhowaad sideed bilood uur yeelatay. Meghan ayaa ka soo laabatay safar seddex maalmood ah oo uu ku tagay Morocco isaga oo la yimid Prince Harry. Agaasimihii hore ee gabdhaha, 37, wuxuu soo afjaray ballanqaadyo taxadar ah intii lagu guda jiray safarkeedii dibadda, oo muujinaysa ilmo koraya.
Meghan, oo aan muujin wax calaamado ah oo hoos u dhacaya, wuxuu qabsaday dareenka boqoradda.
Ninkan reer boqor ayaa u sheegay Vanity Fair: "boqoradda waxaay la yaaban tahay tamarta iyo xaalada murugada leh, iyada oo la siiyey uur culus.
"Boqortooyada iyo jiilkeeda, waxaad caadi ahaan qarin jirtay burqadaada oo aad cagahaaga dhigto heerkan xaamilanimo, laakiin Meghan ma joojin. "
Boqoradda ayaa si muuqata u soo jiitay mawqifka shaqada ee Meghan, uur (Sawirka: GETTY)
Boqoradda ayaa warqad mahad leh u soo diri doonta Meghan, sida ay sheegayso ilaha boqortooyada (Sawirka: GETTY)
Meghan iyo Harry waxay u safrayeen Morocco booqasho shan maalmood ah (1945). Sawirka: GETTY)
Wargeysku wuxuu intaa ku daray in Majesto ay xitaa warqad u diri kartaa Meghan si ay uugu mahadceliso.
Waxay yiraahdeen: "Warqad ayaa laga yaabaa inay sugto Duke iyo Duchess markay soo noqdaan.
"Waxay ixtiraamtaa shaqada adag iyo daacadnimadeeda oo dhan. "
Lamaanaha boqortooyada ee Morocco ayaa dhacay maalmo kadib markii Meghan uu ka soo laabtay booqasho shan maalmood ah oo uu ku tagay New York.
Meghan ayaa lagu sii daayay shirkado badan oo ka mid ah shirkadaha Big Chic. Apple, oo ay ku jirto Surrey, oo caan ku ah caansaanteeda, waxay ku nastaa Polo Bar iyo Ladurée roodhida raaxada ah.
Caddadka fiidkeedu wuxuu ahaa qubaysigeeda mid ka mid ah suxufiyiinta gaarka ah ee The Mark's, kaas oo ku kacaya 57 000 £ (75 000 $) habeenkii.
Meghan waa inay dhalisaa Abriil ama Maajo (Sawirka: GETTY)
Labada nin ee boqorada ah ee booqdey Morocco waxay dhaceen dhowr maalmood kaddib markii ay Meghan ka soo noqotay New York (Sawirka: GETTY)
Munaasabadan waxaa martigeliyay asxaabtii hooyada iyo dadka caanka ku ah liiska martida, oo ay ku jiraan xiddiga tennis-ka ah Serena Williams, xiddigii hore ee suubanaa Abigail Spencer, iyo xiddigaha Jessica Mulroney. ]
Waxay ku noqotey wadanka UK diyaarad gaar ah, kaas oo la qorsheyn lahaa saaxiibada lamaanaha ah, George iyo Amal Clooney. 19659003] Meghan iyo Harry waxay soo laaban doonaan isbuuca soo socda iyadoo boqoradda ay hayso soo dhaweyn ah oo loogu dabaaldegayo sannad-guuradii 50 ee sanad-guurada Prince of Wales.
Badbaadada dadka ugu qanisan
Toofan at Vendôme de Paris